यो त हामी एक पटक भिजेको तस्वीर विचार, आफ्नो प्रोफाइल, "VKontakte" जाने र तिनीहरूले हामी सबै भन्दा राम्रो रुचि छैन भनेर हुन्छ। वास्तवमा, कसरी एल्बम मेट्न "सम्पर्कमा" र, - त्यसपछि हामी आफैलाई सोध्न? यो भीड लागि कारण धेरै फरक हुन सक्छ: को banal प्लीहा, हाम्रो उपस्थिति को असामयिक आलोचना र सायद बस समय दृश्य स्वाद परिवर्तन गरेका छन्।
पुरानो फोटो एल्बम, विवाह फोटो हामी अब प्रसन्न? धेरै वर्ष बित्यो, र ती अब हामी आफूलाई मुर्ख किशोरीहरूको जस्तो देखिन्छ फोटो? या शायद हामी सिर्फ पटक जाने र थप capacious, यो स्रोत लागि विशेष डिजाइन मा अनलाइन आफ्नो फोटो एल्बम राख्न निर्णय गरे। उदाहरणका लागि, इन्स्टाग्राम मा। यदि तपाईं पनि आफैलाई थाहा छ, म एल्बम "VKontakte" कसरी मेटाउन बाहिर आंकडा सँगै सुझाव।
तस्वीर को पूरा हटाउने
सबै को पहिलो, तपाईंले एक पटक सार्वजनिक पहुँच आफ्नो तस्वीर पोस्ट भने, आरक्षण गर्नुपर्छ, र तिनीहरूले तेस्रो पक्ष द्वारा प्रतिलिपि गरियो, त्यसपछि यस्तो तस्बिरहरू वेबबाट, सक्नुहुन्छ शायद हटाउन तपाईं। तथापि, तपाईं आफ्नो अनावश्यक तस्बिरहरू प्रोफाइल मा कसैले हेर्न भने, तपाईंले एक प्रविधी समर्थन साइट लेख्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईं तस्बिरहरू छन् भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ भने, तिनीहरू हटाउन एकदम संभावना छ। किन प्रयास?
सबै को पहिलो, बाँया मा मेनु हेर्न। तपाईं "मेरो फोटो" खण्ड हेर्नुहोस् हुनेछ। यसलाई आफ्नो एल्बम को सबै समावेश गर्दछ। खैर, तपाईं बस प्रतीक को फोटो मा क्लिक गरेर एल्बम र खोल्न सक्ने आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी अन्तर्गत स्थित। यस खण्डमा एक पटक, चुनिएको पुस्तक, त्यसपछि दुष्ट छवि खोल्नुहोस्। फोटो तल तल दायाँ कुनामा तपाईं हटाउने विकल्प जसमा अर्को मेनु देख्नुहुनेछ। कि यो कुनै पनि फोटो हटाउन कसरी सजिलो छ हो! तर, यो सँधै समस्या समाधान गर्दैन। अचानक, तपाईं जो देखि एक सय केही वा हजार-भिजेको तस्बिरहरू तपाईं को छुटकारा चाहनुहुन्छ छ? यस मामला मा, सबै फोटो संग सामान्य मेनुमा फर्कनुहोस्। तपाईं एक पुरा मेट्न एल्बम फेला पार्न, र "सम्पादन गर्नुहोस्" विकल्प प्रयोग गरेर यसलाई खोल्न। तपाईं प्रस्ताव गरिने बीच सम्भावनाहरू एक नम्बर, र पूर्ण एल्बम हटाउने पत्ता लगाउन हुनेछ।
कसरी म पर्खाल बाट एउटा एल्बम मेट्न गर्छन् "सम्पर्कमा"
यो पनि अनावश्यक तस्बिरहरू आफ्नो भित्तामा समावेश गर्ने हुन्छ। र समस्या तिनीहरूले, साथै एल्बम नै तरिकामा "सुरक्षित गरिएका तस्बिरहरू" बाट आफ्नो तस्वीर हटाउन सकिँदैन भन्ने छ। तथ्यलाई यस प्राविधिक फोल्डर सिद्धान्त मा जो कि तिनीहरूले हटाउन सकिन्छ। त्यसैले, तपाईं तस्बिर यहाँ अर्को पछि एक मेटाउन हुनेछ। केवल अन्तिम एल्बम दृष्टि बाहिर हुँदा।
कसरी म समूहबाट "सम्पर्कमा" एउटा एल्बम मेट्न गर्छन्
तपाईं आफ्नो समुदाय सिर्जना गर्न र फोटो खण्डमा पहिलो तस्वीर यसलाई थप्न गर्दा स्वचालित रूपमा मुख्य एल्बम सिर्जना गर्दछ। यसलाई पछि, हटाउन भनेर साथै सक्नुहुन्छ तपाईंको पृष्ठमा सुरक्षित फोटो सम्झना। यसलाई देखि पनि एक गरेर तस्वीर सफा गर्न एक हुनेछ। फोटो सबै अन्य फोल्डरहरू लागि जाँदा, समूह तिनीहरूले तपाईं आफ्नो एल्बम मा के तरिकामा समान हटाइएका छन्।
कसरी "सम्पर्कमा" को एक समूह सिर्जना गर्न र यसलाई unleash गर्न
कसरी आफ्नो कम्प्युटरबाट "कुलपति" पुस्तकचिनोहरूको हेर्न थप्न वा तिनीहरूलाई हटाउनुहोस्
काम भने गर्दैन Yandex, तपाईं यो लेख मदत गर्नेछ
आमाबाबुले बारे अद्यावधिक - आफ्नो भावना बारेमा सबैभन्दा परिवार भन्न!
Kichari: व्यञ्जनहरु र खाना पकाउने विशेषताहरु, उपयोगी सुविधा र समीक्षा
एक सलाद र चिप्स र केकडा लाठी कसरी बनाउने?
खनिज उर्वरक। खनिज उर्वरकहरू। जटिल खनिज उर्वरक
इम्पेरियल4* (बुल्गारिया / सनी बीच) - फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
Gia मा Mari Karandzhi: जीवनी, फोटो